आजको संसारमा, मान्छे आफ्नो diction विकास गर्न हरेक सम्भव तरिका सिक्न, तर मुख्य रूप यो। एक आफ्नो भाषण सुन्दर, उज्यालो, रोचक र बुझ्न सजिलो बनाउन क्रममा, मान्छे प्रयोग वाक्यांश को पालैपालो। शब्दहरू के संयोजन phraseology भनिन्छ?
एक वाक्पद्घति के हो?
वाक्पद्घति को phraseology रूपमा, एक विज्ञान अध्ययन गरिएको छ। Phraseologisms जो समावेश अभिव्यक्ति, भनिन्छ शब्दहरू स्थिर संयोजन। प्रत्येक phraseologism एक विशिष्ट सुविधा यसलाई lexical मूल्य (अर्थात् एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस्) एक शब्द नजिक छ भन्ने छ। - एक idioms: त्यसैले, जो शब्द संयोजन गर्ने phraseology भनिन्छ रूपमा प्रश्न, छोटो जवाफ निम्न गर्न सकिन्छ स्थिर अभिव्यक्ति, जो एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् द्वारा छानिएन गर्न सकिन्छ।
धेरै वर्ष वाक्पद्घति साधारण मान्छे, छैन भाषाविद् द्वारा बनाइयो। धेरै phraseology प्राप्त गर्ने "पखेटा प्रसिद्ध मान्छे को अविस्मरणीय अभिव्यक्ति भयो।
कहाँ र कुन प्रयोग idioms लागि?
यो कहाँ र के तिनीहरूले प्रयोग गरिन्छ जान्न आवश्यक छ, बुझ्न शब्दहरू संयोजन phraseology भनिन्छ जो।
वचनहरू, कि बोली र साहित्यिक काम दुवै प्रयोग idioms छ। colloquial र bookish: कुल phraseology दुई प्रकारका भेद। कुराकानीमा उज्ज्वल भावना को स्थानान्तरण, साथै एक तुलना लागि प्रयोग idioms। साहित्यिक कार्यहरूमा लेखक पाठक सहानुभूति नायक, भावना को अभिव्यक्ति प्रोत्साहन phraseology र पढ्न सजिलो पाठ तिनीहरूलाई प्रयोग, यो रोचक र सजिलै बुझ्ने थियो। लेखकहरूले को साहित्यिक काम अक्सर ल्याउनुभयो र घरेलू (अर्थात् बोली) प्रत्यक्ष वाणी नायक मा idioms प्रयोग गर्नुहोस्।
आज idioms को 19-20-औं शताब्दीपछि भन्दा कुनै कम लोकप्रिय छन्। तिनीहरूले पनि मानव बोली नै, साथै साहित्य को काम मा प्रयोग गरिन्छ।
वाक्पद्घति साहित्य र रूसी भाषामा सम्बन्धित
वाक्पद्घति ग्रेड4र5मा विद्यालयमा अध्ययन गर्न, र अध्ययन पूरा 11 मा यो साहित्य र रूसी भाषामा दुवै9र 11 कक्षाहरू को परीक्षा कहिलेकाहीं phraseology, विशेष साहित्य मा साधारण संग जब पाइएका टिप्पण लायक छ थाल्छन्। वाक्पद्घति र केही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरू उल्लेख रूपमा, इतिहास को पाठ सिक्न।
के phraseology उदाहरण भनिन्छ शब्दहरू संयोजन:
एक Vaska सुन्नुहुन्छ तर खान - यो वाक्यांश पहिलो Krylov गरेको छोटो कथा मा प्रदर्शन भएको थियो, र पछि यसलाई मूल्य क्रूज पाएको यति लोकप्रिय भयो। यो phraseologisms व्यक्ति केहि आरोप, तर उहाँले यी reproaches कारण ध्यान गर्न कुनै ध्यान दिन्छिन् भने,
एक कास्केट बस खोलियो - साहित्य कक्षाहरू मा अध्ययन जो अर्को वाक्पद्घति। अभिव्यक्ति Krylov को नै छोटो कथा मा गरिएको थियो, र त्यसपछि phraseology भयो। यसको मूल्य छ: अविश्वसनीय जटिल देखिन्थ्यो जो अवस्था, बाहिर सरल र आदिम तरिका हो।
उनको टाउको मा राजा बिना - यो वाक्यांश कमेडी "द निरीक्षक सामान्य" मा Gogol प्रयोग भएको छ। phraseologisms मा यो मूर्ख मानिस, पूर्ण अनुभवहीन र ढिला सुस्ती उजुरी गर्नुस् बारेमा भने।
Twiddle - यो वाक्पद्घति यसलाई मानिसहरूले प्रयोग गर्न थाले, जो पछि आफ्नो काम "बाल्यकाल" लेवी टोलस्टोय आफैले प्रयोग गरेको छ। वाक्पद्घति खर्च व्यर्थ छ।
वाक्पद्घति इतिहास सम्बन्धित
धेरै idioms सीधा ऐतिहासिक घटनाहरू सम्बन्धित छन्। कहिलेकाहीं, इतिहास को पाठ एक व्याकुलता idioms सिक्न रूपमा यो स्कूल पाठ्यक्रम अनुमति दिन्छ भने।
शब्दहरू के संयोजन phraseology भनिन्छ? इतिहास सम्बन्धित उदाहरण: आर्किमिडीज 'लीवर, बुइगल नुन, को gauntlet तल फेंक, Arcadian idyll Achilles एडी । Bartholomew गरेको रात, आदि थुप्रै idioms उचित नाम (एक स्थान, एक व्यक्तिको नाम, आदि ... को नाम) सुरु, यस्ता idioms एउटा सानो साथ लेखिएका छन् पत्र।
यस लेखमा हामी कुन शब्दहरू संयोजन phraseology भनिन्छ सिक्न।
एक व्याकरण श्रेणी रूपमा सहायक।
"Alaverdi": शब्द को मूल्य
रूसी र विदेशी भाषामा Reflexive क्रिया
एउटा प्रस्ताव गर्न बच्चा मदत
चरण पुस्तिका द्वारा चरण: पानी आपूर्ति र सरसफाइ गर्न रेडियोबिना जडान
माग को प्रकार
इटालियन साम्राज्य इतिहास। इटाली के colonies आयोजित?
दूध "पखेटा samaras" - युवा आमा सबै भन्दा राम्रो सहायक
रूसमा सबैभन्दा सस्तो नयाँ कार
Bacardi कालो। मनपर्ने ककटेल